Cristiano Ronaldo Oo Ka Hadlay Filashada Sannadkan, Koobabka Uu Qaaday, Xaaladda Kooxdiisa iyo Arrimo Kale
HomeWararka MaantaCristiano Ronaldo Oo Ka Hadlay Filashada Sannadkan, Koobabka Uu Qaaday, Xaaladda Kooxdiisa iyo Arrimo Kale
29/09/2016 Abdiwahab Ahmed
Weeraryahanka Xulka qaranka Portugal iyo Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa sheegay in ay kooxdiisu doonayso in ay difaacato tartanka Champions League ee ay sannadkii hore ku guuleysatay.
Ronaldo oo Sabtidii sameeyey dhaqan xun oo aad loo dhalliilay markii uu bixiyey ishaaro diidmo ah beddel uu tababarihiisu ku sameeyey, ayaa arrintaas meesha ka saaray markii uu gool u dhaliyey kooxdiisa ciyaartii Borussia Dortmund ee Salaasadii, markaas oo inta uu gool dhaliyey uu u tegay tababarihiisa lana damaashaaday, si uu u muujiyo in aanu khilaaf jirin.
Ronaldo oo ka hadlaya kooxdiisa iyo tababare Zidane waxa uu yidhi: “Waxaanu haysanaa koox wanaagsan iyo tababare fiican. Waxaanu haysanaa khibraddii sannadkii hore” sidaas ayuu yidhi Ronaldo oou warramay World Soccer, waxaanu intaas raaciyey: “Waanu ognahayin uu yahay tartan adag, waxaanu u baahanay nasiib wanaagsan, laakiin waa in aanu hore u socono.”
Cristiano Ronaldo in ay suurtogal u tahay kooxdiisa Real Madrid in ay mar labaad si xidhiidh ah ugu guuleystaan tartankan, waxaanu yidhi: “Waa loollan wanaagsan, khaasatan annaga Real Madid koox ahaan, waxaanan filayaa in sannadkan ay suurtogal noo noqon doonto. Waan ku niyadsamahay in aanu ku guuleysan doono.”
Ronaldo waxa uu dib u milicsaday xusuusihii wanaagsanee sannadkii hore iyo koobabkii labada ahaa ee uu gacanta ku dhigay ee Champions League iyo Euro 2016, kuwaas oo uu doonayo inuu mar kale hantiyo.
Koobka Adduunka oo ah tartanka kaliya ee aanu ku guuleysan ayaa uu ROnaldo tibaaxay in uu doonayo in uu waddankiisa u qaato, laakiin uu yahay tartan adag oo waddamo waaweyn ay ka qayb-galaan, taas oo ay u dheer tahay in culays badan la saaro ciyaartoyga.
Ronaldo ma noqonayaa tababare?
Waraysiga lala yeeshay, waxa Ronaldo lagu weydiiyey in marka uu kabaha kubadda tiiriyo ee uu hawlgabka noqdo, in uu noqon doono tababare kubadda cagta ah iyo inkale, waxaanu yidhi: “Ma aha wax aan haatan ku fikirayo. Haddii aad imika i weydiiso inay maskaxdayda ku jirto, waxaan ku leeyahay ma doonayo inaan noqdo tababare kubadda cagta ah. Sababtoo ah, waa shaqo aad u adag. Hadda kubadda cagta ayuu dareenkaygu yahay iyo ciyaaristeeda, aadna waan u jecelahay. Laakiin mustaqbalka, cidna ma ogaan karto, waxa laga yaabaa shan, lix illaa toban sannadood kaddib in ay maskaxdaydu isbeddesho oo aan noqdo tababare cajiib ah.”
Paris Saint-Germain vs Celtic 7-1 – All Goals & Highlights
22/11/2017 Abdiwahab Ahmed
All Goals Portugal Primeira Liga: CD Tondela 1-1 Vitória Setúbal
Arsenal 2-2 Chelsea – All Goals & Extended Highlights
03/01/2018 Abdiwahab Ahmed